Khariidadaha Google khad la'aanta oo soo dejiso sawirrada jimicsiga - Geofumadas
Khariidadaha Google offline iyo download images geo-referenced
Febraayo, 2009 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
Waxyaabo kale oo yar ayaa u soo baxay si loo hubiyo in xogta daalacashada ee Google la kaydiyo si loola tashado mar haddii aanan ku xirnayn internetka. In kasta oo Google Earth laftiisu kaydiso, haddana lama hubo halka ay ku keydsan tahay, sida in loo wareejiyo disk kale ama la dhigo haddii ay dhacdo in aan rakibno nooc cusub oo biraawsarka ah ama qaabeynta mashiinka.
Wixii hadda StitchMaps ayaa outlet ah images soo degsado, laakiin kale oo la hoos mahrajaan georeferenced lama arag haddii ay taasi waxay xitaa lagala soo bixi karaa oo ku raran galay ArcGIS leh heerarka kala duwan ee miisaanka.
Labadan xal ee aan soo bandhigi doono waa kuwo xiiso leh, in kastoo aysan la shaqeyneynin Google Earth laakiin ay la shaqeynayaan Khariidadaha Google, laakiin waxay yihiin bedel dhaqaale oo ujeedka ah awood u lahaanshaha inay ku hayaan xogta hagista qaab koontarool ah ama ka soo rartaan ArcGIS heer ka duwan qaabkooda. Labadaba waxaa abuuray shirkadda Muuqaal joornaal ah.
Kani waa biraawsar aad u awood badan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si isku mid ah u daawato lakabka sawirrada iyo khariidadaha. Laakiin waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in tikniyoolajiyaddeeda ay u oggolaaneyso meelaha laga baadhay in lagu keydiyo, galka aan ka dooran karno.
Sidan oo kale, macluumaadka waa lagala tashan karaa markale xitaa marka uusan jirin isku xirnaan iyo meel loo kaydiyo, marin loo maro server ayaa la dooran karaa si dhammaan isticmaaleyaashu ay ula tashan karaan xogtaan iyaga oo aan cunin xiriirka internetka. Sidoo kale galkaas waxaa loo wareejin karaa mashiin kale ... weyn.
Waxyaabaha kale ee xiisaha leh waa in meelaha la kaydin karo sida tabs, sidaa daraadeed waxaa suurtagal ah in la arko daaqadaha kala duwan iyada oo aan loo marin meel walba.
Wixii $ 29.95 Waxaan ka helaa maalgashi xiiso leh, noocyadda tijaabada ah ayaa laga soo dejin karaa si aan u iibsan waxa aan isku dayeynin.
Halkan waxaad soo dejisan kartaa qaybta tijaabada ee Map View.
Dhoofinta Khariidadu waa horumar ku wajahan GIS, maaddaama ay u saamaxayso soo degsashada iyo ka-dhoofinta sawirrada Khariidadaha Google mosaic ahaan. Marwalba waa suurtogal in la kala doorto Google Satelite Images, Maps Street iyo Terrain.
Laakiin bal aynu aragno waxa soo-uruurintan ah ee kugu hagaya GIS:
1. Soo degsashada sawirada
Dhoofinta Khariidadu waxay ku soo dejisan kartaa sawirrada muusikada galka aan dooran karno. Waa suurtagal in la doorto iskuduwaha daaqada si aad u soo dejiso, gacanta ama daaqad khariidada ku taal. Waxa kale oo aad dooran kartaa nooca lakabka, markaa qaybta hoose waxay muujineysaa soo dejinta, tirada sawirada iyo kontaroolada si loo joojiyo ama dib loogu bilaabo soo dejinta.
Waxaa xiiso leh in kumbuyuutarkan qabsashadu uu sameeyn karo hawlo kala duwan oo isku wakhti ah, isla markaasna waxaad u habeyn kartaa dialup, taas oo haddii xiriirku hoos u dhaco, markaad si dhakhso ah dib ugu soo noqoto dib u soo celinta.
2 Heerarka kala duwan ee habka
Gudida saxda ah waxay u oggolaaneysaa 18 in ay soo dejiso heerar kala duwan, iyo mid kasta oo ka mid ah waxay abuureysaa faylka masawirka sawirada.
Xaaladdan, waxaan soo xushay heerarka 5, oo leh sawirrada jpg, sida aad arki karto, waxaan sidoo kale abuuray faylka juwab si markaa ay uga soo wacaan barnaamij khariidad ah ay soo galaan.
Waa suurtagal in la doorto omp, jpg, gif, png iyo bmp qaabab. Shaqeynta heerarka kala duwan ee miisaanka ayaa ka dhigeysa mid ka fiican tan Khariidadaha Diiwaangelinta, taas oo keliya oo keliya u oggolaaneysa hal heer in ay hoos u dhacaan, xitaa haddii midkaas uu kuu ogolaanayo inaad hoos u dhigto jilidda, xaqiiqda ah in uu isku daro hal kaliya sababtoo ah inaad lumiso joogteyn u dhexeeya heerarka kala duwan ee habka maaddaama faylka kalibration ay kali ka dhigayaan geesaha dibadda.
Noocka tijaabada ayaa suurtogal ah inuu sawirro ka qaado sawirada ilaa heerka 11, oo leh qiyaasta qiyaasta ee 80.
Tani ku samee shirkad Google Earth laakiin marka la eego jaangooyooyinka Google ee khiyaaliga ah, iyada oo tan la sameeynayo Dib u dhoofinta Map waxaa suurtagal ah in la abuuro xogtaada adigoo adeegsanaya xogta Google.
3 Archive for ArcGIS
Si aad u soo dejisan images iyo dooran "waxaa ka mid ah file dunida ESRI" option abuuraa file XML ah in ka qabtaa leben ah in lagu shubto ka ArcGIS, sababtoo ah haddii aad isku aragto, faylka ku jira qiyaas ee images iyo fayl meesha images ku kaydsan yihiin miisaan kala duwan.
Muujinta Daaqada waxay iila muuqataa xalka ugu fiican ee aan ka soo qaadan karo Khariidadaha Khariidadaha Google, oo si fiican loo isticmaalay waxay u qalantaa sidii maalgashi.
Halkan waxaad soo dejisan kartaa qaybta tijaabada Khariidadda Dibadda.
Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad kala tashan kartaa bogga OfflineSoft.
Post Previous" Hore AnyDWG, si aad u beddesho faylasha dwg adoon lahayn AutoCAD
Post Next Taarikada Tectonic ee Google EarthNext »
11 Jawaabo "Khariidadaha Google qadla'aan oo soo dejiso sawirada juqraafiyeed"
Newer isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan soo dejiyo aag weyn oo ah google-ka si looga furo barnaamijka mapinfo. waxay noqonaysaa saldhig si loo abuuro dariiqooyin khadad telefoon ah. Kordhinta khariidadda ayaa kor u qaadeysa khariidaddu. taas oo aniga ii qaban kara salaan
Waxaan rabaa taas
Hagaag, taasi waa waxa MapExport ay tahay.
Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa AutoCAD + Plex.Earth ama stitchmaps Google Earth.
Edgar Padrón isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan ka soo dejiyo sawirada Khariidada Google ee dhulka Venezuela ... Waan ku arki karaa iyaga Google Pro laakiin waxaan rabaa inaan ku soo dejiyo sida mosaics-ka sawirada rester ... Mahadsanid
Haddii aad soo dejiso sawirro, tusaale ahaan qaab jpg, midkoodna ma laha juquraafi ahaan. sidaa darteed haddii ololka Arcview uu ku dhici doono isla boos, waxaad u baahan tahay inaad mid mid u eegto joqoraafi ahaan.
Isku day inaad fahamto codsigaaga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho barnaamijka Stitchmaps si aad u soo dejiso sawirka boostadan Waxa uu ka hadlay arintaas.
pc2 isagu wuxuu leeyahay:
Waxa aan u baahanahay ayaa ah inaan soo dejiyo sawirka aag gaar ah oo aan ku furo karo aragtida qaansada, ma iga caawin kartaa tan t .mahadsanid
Waan ka xumahay su'aasha, waxaan ahay amiir, waxaan rabaa inaan ka soo dejiyo mosicos google esrth markaan markaan ka raadsanayana meesha aan u socdo, waxaan u siiyay soo dejin.
Google ma iibiso orthophoto
ka shaqeeya aagga cadasto Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii gogladu iibiso lafaha iyo kharashka
Manuel Urroz isagu wuxuu leeyahay:
Xogta eart ee Google waa ka saxan tahay khariidadaha orthophoto
gobolada isagu wuxuu leeyahay:
macluumaadku aad ayuu u wanaagsan yahay ... mahadsanid ... Waxaan u maleynayaa inaan qaadan doono dookha labaad